Lesson 0.2 – UnoArduSim | Easydevboards
Home / Lesson 0.2 – UnoArduSim
UnoArduSim ကတော့ Queen’s University, Canada က အငြိမ်းစားယူသွားပြီ ဖြစ်တဲ့ Associate Professor Stan Simmon ရေးထားတဲ့ Arduino Uno Simulator ဖြစ်ပါတယ်။ Windows OS ပေါ်မှာပဲ သုံးလို့ရပါတယ်။ Simulator ဆိုတာကတော့ တကယ့်ပစ္စည်းတွေ အလုပ်လုပ်တဲ့အတိုင်း ဖြစ်အောင် လုပ်ထားတဲ့ Computer Software ပါ။
ဒီ Simulator ရဲ့ အားသာချက်ကတော့ ပစ္စည်းတွေ ဝယ်စရာမလိုဘဲ စမ်းသပ်ကြည့်နိုင်ခြင်း၊ Arduino Program တွေကို တစ်ဆင့်ခြင်း Run ကြည့်နိုင်ခြင်း (Debugging)၊ ကိုယ့်ရဲ့ Program အမှားအမှန်ကို တကယ့် Hardware ပေါ်ကို မတင်ခင် စစ်ကြည့်နိုင်ခြင်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
အားနည်းချက်ကတော့ တွဲဖက်သုံးနိုင်တဲ့ အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းတွေဟာ တကယ့်အပြင်မှာလို အစုံမရှိခြင်း၊ Arduino မှာ အလွယ်တကူတပ်ပြီး သုံးနိုင်တဲ့ Arduino Shield လို့ခေါ်တဲ့ အသင့်သုံးရုံ Circuit တွေကို မသုံးနိုင်ခြင်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
Simulator ဟာ တကယ့်ပစ္စည်း မဟုတ်တဲ့အတွက် Simulator မှာ အဆင်ပြေပေမယ့် တကယ်သုံးတဲ့အခါမှာ အဆင်မပြေတာမျိုးလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Simulator တွေဟာ တကယ့်လက်တွေ့ လုပ်ငန်းခွင်တွေမှာလည်း အသုံးဝင်ပြီး သင်ယူလေ့လာသူတွေအတွက်ကတော့ တကယ်ကို အဆင်ပြေတဲ့ Software ဖြစ်တာမို့ တက္ကသိုလ်ကောလိပ်တွေမှာပါ သုံးလေ့ရှိပါတယ်။
ဒီ UnoArduSim ဟာ သုံးလို့ အဆင်ပြေလွယ်ကူပြီး အလကားရတဲ့ Arduino Simulator ဖြစ်တာမို့ Arduino Uno ကို သုံးမယ့်သူတိုင်း သိထားသင့်တဲ့ simulator တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
UnoArduSim can be download here.
← Lesson 0.1 – What is Arduino?
Lesson 0.3 – Digital Electronics →